Ọrụ na ojiji nke igbe igbe - onye nrụpụta ike na Singapore pte ltd
Site na isi iyi na -agbagharị gaa na ngwaọrụ ọzọ site na iji oke gia, igbe gear na -enye ntụgharị na ọsọ ọsọ. Enwere ike iji ya n'ọnọdụ dị iche iche dịka igwe ịnyịnya pedal, igwe kwụ ọtọ, na ebe ọ bụla ọzọ na -agbanwe agbanwe na mkpa ọ dị mkpa ka emegharịa ya. Mana, n'ụgbọ ala, ihe a na -ahụkarị bụ ebe wiil ndị na -anya ụgbọ ala, gearbox nwere ogbe taper na -eme ka nrụpụta nke injin dị n'ime. Enweghị ike iji ha rụọ ọrụ dị ka nkwụsị ma ọ bụ ịmalite n'ihi na ọ dị mkpa ka arụ ọrụ injin ndị a n'ọsọ ọsọ dị elu.
O doro anya na a ga -ejirịrị ha rụọ ọrụ n'ụgbọ ala ebe a na -eji igbe gearbox eme ihe n'ụgbọ ala. A na -eri ọtụtụ ụgbọ ala na mmepe akụ na ụba anyị n'ihi nke a, igbe igbe na -arụ ọrụ dị oke mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ ole na ole n'ime ha maara etu ụgbọ ala si arụ ọrụ n'agbanyeghị na ọtụtụ mmadụ nwere ụgbọ ala, ma ya fọdụkwa mmekọrịta dị n'etiti ngwa igwe dị iche iche. Maka ndị nwere ụgbọ ala, ọ bụ mkpebi amamihe ka ịmụta ihe banyere igbe igbe site na ndị na -ebubata taper dị ka igbe ụgbọ ala bụ akụkụ bụ isi maka usoro ọrụ ya.
N'iji crankshaft nke injin ahụ, a ga -ejikọkarị gearbox n'ụgbọ ala. Na ịkwọ ụgbọ ala, a na -ebunye mmepụta nke nnyefe site na oghere draịva na ụdị dị iche iche. N'ịga n'ihu ụgbọ ala n'ihu, gearbox na -agbanwe ọsọ injin ka ọ bụrụ torque. Ọ bụ ọrụ bụ isi nke gearbox. N'etiti ụgbọ ala akpaka na ụgbọ ala akwụkwọ ntuziaka, enwere ụfọdụ ihe dị iche.
A na -eji ya n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ ewezuga n'ụgbọ ala, enweghị mgbagha na igbe igbe sitere na ndị na -emepụta ohia taper. Mana ebe ọ bụla ha na -eji ya bụ, enweghị ike ịgbanwere ike ịhazigharị gia n'oge ojiji, nnyefe ndị a na -ekerịta otu atụmatụ dị mkpa. Ọ bụ n'ihi na n'oge atọrọ nnyefe ahụ, a na -edozi oke nkedo.
Na mkpokọta, enwere ihe ọmụma gbasara ọrụ ha na igbe igbe. N'ime igbe igbe, ọ ga -adị mma ka ị nweta ụfọdụ ihe ọmụma. Na ndụ gị n'ọdịnihu, ma eleghị anya ọ ga -enye aka.